नेपाली काँग्रेसको नयाँ गित वजारमा
वुटवल,७ मंसिर | सुनसुन साथी हाम्रो देव्रे छाती छातीभीत्र मुटु मुटुभीत्र नेपाली काँग्रेु पार्टी यो शव्द सुन्न वित्तीकै साच्चै यति आनन्द आउछ एकोहोरो भएको मान्छेलाई पनि एकाएक स्फुर्ति लाईदिन्छ । चुनाव नजिकिए सङगै नेपाली गीत संगीतका हस्तिहरुकै सहकार्यतामा अर्को उत्कृष्ट काँग्रेस चुनावी गीत “सुन सुन साथी”बजारमा आएको छ । चर्चित सर्जक एकनारायण भण्डारीको उत्कृष्ट लय तथा शब्द सृजनामा बजारमा आएको गीतमा बहुचर्चित गायक तथा सर्जक बिमलराज क्षेत्री र गायिका ऋतु थापाको आवाज रहेको छ । बिमल राज क्षेत्रीकै म्यूजिक कम्पनी प्रसान्ति डिजिटल मार्फत बजारमा आएको गीतमा अभिनय राजु केसी र सृजना क्षेत्रीको रहेको छ । कुमार केसीको निर्देशनमा तयार पारिएको म्यूजिक भिडियोको छायांकन अजय रेग्मीले गरेका हुन् । प्रविन भट्टको सम्पादनमा तयार पारिएको भिडियो अहिले चर्चामा छ।गीत नेपाल बिद्यार्थी संघका केन्द्रीय महामन्त्री कुन्जनराज काफ्लेको रहेको छ। नेविसंघकै केन्द्रीय सदस्य शैलेन्द्र शर्मा गौडेलले गीत निर्माणको कार्यमा व्यवस्थापन गरेका छन्।
लन्डनमा हुने सागर आलेको कन्सर्ट बिवादमा ! (सागरकाे प्रतिक्रिया र भिडियो सहित)
नेपाल आइडल टप ४ सागर आलेको बेलायतमा हुने कार्यक्रम विवादमा मुछिएको छ १ मगर संघको स्थापना दिवस पारेर यूकेमा आलेलाई झिकाइ भव्य कार्यक्रम गर्ने संघ र आलेबीच पूर्व सहमति भएको तर त्यो कार्यक्रम अघि नै अर्को समुहले सागरलाई नै लन्डन ल्याएर कार्यक्रम गर्ने तयारी भएको भन्दै विवाद निस्किएको हो । यसअघि जातीय एकता र सद्भाव देखाउंदै नेपाल आइडल प्रतिष्पर्धाबाट बाहिरिएपछि आलेलाई सान्त्वना स्वरुप मगर संघ यूकेले चन्दा संकलन गरि करिब ११ लाख रुपैयां हस्तान्तरण गरेको थियो । बेलायतमा ‘सागर धमाका’ नाममा आलेको कार्यक्रम डिसेम्बर १ देखि हुंदैछन् । तर, बेलायतमा करिब दश हजार मगरहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था मगर संघ यूकेका सांस्कृतिक सचिव तुलचन्द्र तिलिजाले फेसबुकमा एक स्टाटस लेख्दै, पटक पटक सहकार्यका लागि आग्रह गर्दा समेत सागर धमाका आयोजकले वेवास्ता गरेपछि वाध्य भएर डिसेम्बर १ देखि वेलायतमा हुने सागरका कुनै पनि कार्यक्रममा आफ्नो संवन्ध नहुने जनाएकाछन् । यस अघि पनि मलेशियामा आयोजकहरुको विच सहकार्य नहुँदा सागरलाई विवादमा मुछिएको थियो । आज यहि विषय लाई लिएर केहि अनलाईनहरुले सागरले धोका दिएको र मगर संगले सागरको कार्यक्रम बहिष्कार गरेको समाचार प्रकाशित गरेपछि सागरले फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै घुमाउरो पारामा गम्भीर असन्तुष्टि पोखेका छन् । सागरकाे प्रतिक्रिया मान्छेहरुलाइ के रोग लागेको छ हो । येदि म मन पर्दैन भने मेरो कुरा मात्र किन गर्नु
लूट-२ सामाजिक संजालमा भयो सार्वजनिक, (हेर्नुहोस पुरा चलचित्र) ।
काठमाडौं | गत वर्षको सर्वाधिक चलचित्र लूट-२ युटुब मा सार्वजनिक गरिएको छ| पाच वर्ष पहिले पर्दशनमा आएको सुपर हिट सिनेमा लूट को सिक्वेल लूट-२ लाई अहिलेका चर्चित निर्देसक निश्चल बस्नेतले निर्देसन गरेका हुन् | सिनेमामा माधव वाग्ले र नरेन्द्र महर्जनको सयुक्त लगानी रहेको छ|पुरुसोत्तम प्रधानले खिचेक हुन । भिडियाे नखुलेमा यहा क्लिक गर्नुहाेला । हेर्नुहोस पुरा चलचित्र
फेसबुकमा सेरे भनेर चिनिने चर्चित यी अनुहार कसकाे हो, उनको वास्तविकता नाम के हो त ? थाहा पाउनुहाेस ।
अधिकांस सामाजिक संजालको भित्तामा देखीने एउटा पात्र निकै चर्चित छन् ति हुन् शेरे जसलाई नेपाली सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताहरुले शेरे नाम दिएर ट्रोल बनाउने तथा हास्यब्यंगमा खुवै प्रयोग गर्ने गरेका छन् । वास्तवमा को हुन् त यि शेरे कसको चीत्र हो यो धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ,यो तस्वीर चर्चीत चीनीया बास्केटबल खेलाडी याओ मिङको हो । सन् २००२ देखी १८ बर्षको उमेर देखी बास्केटबल खेल्न शुरु गरेका मिङ सन् २००९ मे मा एक प्रतियोगितामा खेल समपन्न भएपछि यस्तो मुख बनाई हाँसेका थिए जसलाई तत्कालै एक चित्रकारले सेतो स्केच बनाई ब्यङग्यको रुपमा प्रयोग गर्ने निर्णय गरि सामाजिक संजालमा पोस्ट गरेका थिए त्यसपछि यो स्केच सर्वत्र फेसबुकमा भाईरल बन्यो । र हिजो आज राजनीतिक ब्याङ्ग देखि लिएर हरेक कुरा हरुमा यो तस्बिर भाईरल भनि रहेको छ । भिडियो तल हेर्नुहोस् , तल नखुले यहाँ क्लिक गर्नुहोला !
मिस वल्डमा नेपालकी निकिता चण्डकले हाँसिल गरिन् ठुलो सफलता (भिडियो सहित)
काठमाडौं,३० कार्तिक | ‘मिस वल्र्ड २०१७’ नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल सुन्दरी निकिता चण्डकलाई पहिलो सफलता मिलेको छ । उनी अन्तिम प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने उत्कृष्ट ४० सुन्दरी भित्र छनौट हुन सफल भएकी हुन् । चीनको सन्यामा शनिबार राति आयोजित ‘हेड टु हेड’ कन्टेस्टमा निकिता ग्रुप नम्बर ३ बाट विजयी हुँदै अन्तिम प्रतिस्पर्धाका लागि छानिएकी हुन् । मिस वल्र्डमा यसदेखि वर्षदेखि हेड टु हेड कन्टेस्टबाट २० अन्तिम प्रतिस्पर्धी छान्न थालिएको हो । पाँचजना फास्ट ट्र्याकबाट र १५ जना निर्णायकबाट अन्तिम प्रतिस्पर्धाका लागि छनोट गरिन्छ । प्रतियोगीताको अन्तिम स्पर्धा आगामी शनिबार आयोजना हुनेछ । यिनै ४० प्रतिस्पर्धीर्ले र्याम्प नाप्नेछन् । यि नै प्रतियोगी मध्य बाट एक बिस्वसुन्दरी घोषित हुनेछिन् । भिडियो हेर्नुस्
टोप बहादुर रायमाझी देउसी–भैलोमा ढल्की–ढल्की नाँचे पछि …
काठमाडौं । आदर्श मा.बि. खनदह पुर्व बिद्यार्थी समाजद्वारा आयोजित परम्परागत देउसी–भैलो कार्यक्रममा पुर्व उप–प्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री टोप बहादुर रायमाझी ढल्की–ढल्की नाँचेका छन । तिहारसँगै गाउँ तथा शहर जताततै देउसी–भैलोको रौनक छ । क्लब, समूह, सहकारी, विद्यालयदेखि सञ्चारकर्मीलाई देउसी भैलोले छोएको छ। बालक, युवा र वृद्धसम्म तिहारको देउसी भैलोमा झुमिरहेका छन्। तर देउसी भैलोको मौलिकता भने बर्सेनी हराउँदै गएको छ। विशेष गरी तिहारको अवसरमा नाचिने सोरठी, पैस्यारु, टप्पा, वनगारीलगायतका नाच हराउँदै गएका छन् । यसको सट्टा भैलोेमा तोकेरै पैसा असुल्ने, युवायुवती पश्चिमेली संस्कृतिका गीतमा नाच्ने गरेको पाइन्छ। तर हराउँदै गएको संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने उद्देश्यले श्री आदर्श मा.बि. खनदह पुर्व बिद्यार्थी समाजले काठमाडौंमा परम्परागत भैलो खेलेका छन्। भिडियाे हेर्नुहाेस्:
छाडेपनि यो हावा बहन भन्दै केशव र मेलिना (भिडियो सहित)
काठमाडौं । संगीतको ‘नसा’ मानिसलाई कति हुन्छ ? यसको प्रष्ट उत्तर हामीसँग नहोला । गीत गाएर आनन्द लिन र सुनेर सन्तुष्ट हुनुको कुनै सिमा नै नहुँदो रहेछ । किनकी भर्खरै सांगीतिक क्षेत्रमा हामफालेका केशव भावुकको भावना बुझ्दा लाग्छ गीत गाएर ‘स्टार’ बन्ने सपना र संगीतमा चुर्लुम्म डुब्ने अभिलाषालाई रोक्न नसकिने नै रहेछ । सात समुद्रपारीको दुवईमा दैनिक १२ घन्टा ड्यूटीमा खटिएर गायन क्षेत्रमा लागेका केशवले दुई महिनामा करिब २७ वटा गीत रेकर्ड गराइसकेका छन् । नौं वटा गीत समेटिएको ‘भावुक’ एल्बम पनि सार्बजनिक गरेका छन् । विनोद खम्बुको संगीत रहेको आधुनिक उल्बम भावुकमा केशवले तीनवटा गीत आफैं लेखेका छन् । सबै गीतमा आफैंले स्वर भरेका छन् । नौवटा गीत समावेश रहेको एल्वममा मेलिना राई, रेश्मा राई, ममता राई, अमृता लिम्बु, र पासाङ डिकी शेर्पाले पनि स्वरमा साथ दिएका छन् । एल्वममा पछिल्लो समय चर्चामा रहेका गीतकार राम रेप्चुङ राई, नरेश भट्टराई, पाली मगर विक्रम अन्नत, युवराज राई र केशवका गीत समेटिएका छन् । एल्बममा रहेको ‘छाडे पनि यो हावा बहन’ गीतलाई भिडियोमा उतारिएको छ । नायिका सारिका घिमिरे र मोडल दिनेश बिसीले अभिनय गरेका छन् । गीत केशबको र मेलिना राईले स्वर दिएका छन् । गीतको भिडियोलाई टेकेन्द्र शाहले निर्देशन/सम्पादन गरेका छन् । खोटाङको दिक्तेलमा जन्मिएका केशवले करिब आठ बर्ष विदेशी भूमिमै विताइसकेका छन् ।
केहि समय अघि (करिब एक बर्ष) मात्रै सामाजिक सन्जालमा जताततै ‘तरकारीवाली’ नामले भाइरल बनेकी पृथ्वीराजमार्गसँग जोडिएको चितवनको फिस्लिङ बजारपारि गोरखा, भुम्लिचोक–८ को पहाडी गाउँ वाङ्लिङ्की कुसुम श्रेष्ठ फेरी चर्चामा आएकी छिन । एक बर्ष अघि मात्रै तरकारी बोक्दै गरेको फोटो सामाजिक सन्जालमा एकाएक रातारात भाइरल भएर तरकारीवालीको ट्याग भिरेकी तरकारीवाली कुसुम नेपालमा मात्रै हैन देश विदेशसम्म उनको चर्चा ह्वात्तै चुलिएको थियो । गाउकी सोजी उनि निकै लजालु स्वभावका छिन् । उनको फोटो भाइरल बने संगै धेरैले उनलाई त्यति बेला पनि म्युजिक भिडियो र फिल्म सम्म को अफर गरेका थिए । तर उनले त्यसलाई इन्कार गरेकी थिइन । केहि म्युजिक भिडियो खेले पनि खासै सफलता पाउन सकेनन । तर उनि पढाइलाई निरन्तरता दिने र पछि मात्रै फिल्म खेल्ने कुरा बताएकी थिईन । अहिले उनि प्लसटु रनिङ्ग गर्दै छिन । धेरै समयको अन्तरल पछि फेरी उनि म्युजिक भिडियोको मध्यमबाट आउदै छिन् भने फिल्म खेल्ने पनि पक्का भएको छ । दशैँ तिहारको बिदालाई सदुपयोग गर्दै म्युजिक भिडियो खेल्ने उनले बताईन । भिडियो खेले बापत कति पारिश्रमिक लिनु हुन्छ भन्ने प्रश्नमा भने उनि बताउन आनाकानी गरिन। साझापेजबाट
यस्तो छ, हास्य कलाकार बुद्धी तामाङको दिनचर्या स्थान- अनामनगरस्थित एक रेस्टुराँ समय- साँझ ६ बजे हैट, कलाकार बुद्धि तामाङ साह्रै हतारमा थिए । ‘भोलि युरोप लाग्नुछ,’ उनी छटपटिँदै थिए । सामान्य किनमेल गर्नसमेत भ्याएका रहेनछन् । भेटघाट, भलाकुसारी, अन्तर्वार्ता, हाई-हेल्लोमै दिन ढल्किएछ । साँझ किनमेलमा निस्किनुअघि उनी हामीसँग गफिँदै थिए । ‘हैट’ उपनामले चिनिने सानो काँटका उनी धर्के गाढा रंगको सर्टमा थिए । आँखामा वर्गाकार चस्मा । जतिसुकै हतार भए पनि उनी हाँस्न भने लोभ गरिरहेका थिएनन् । हरेकजसो वाक्यांशमै खितिति हाँसिरहेका थिए, मिलेका मसिना दाँत देखाउँदै । बुढीबिनाको वैंश चलचित्रमा उनी विवाहित हुन्छन्, पत्नीसँग खटपट परिरहन्छ । ‘छक्कापञ्जा’की बुढीले त उनलाई तास खेलेको देख्यो कि लखेट्थिन् । तैपनि, माया गर्थिन् । कबड्डी ‘फेम’ बुद्धीको अफस्क्रिनभने त्यस्तो रहेनछ । रियल लाइफमा त्यसरी ‘लभ एन्ड हेट’ गर्ने बुढी रहिनछन् । घट्टेकुलोमा एक्लै डेरा जमाएका रहेछन् । भात पकाउने, लुगा धुने, सिरक मिलाउने, कोठा सफा गर्ने काम सबै आफैं गर्दारहेछन् । ‘अल्छि लाग्दैन,’ उनले भने ‘हैट, बानी परिसक्यो ।’ वषौर्ं भएछ, यसरी एक्लै बसेको । पहिले टोलमा कसैले चिन्दैनथे । अहिले सबैले चिन्छन् । तरकारी किन्न अनामनगर चोकतिर निस्कँदा माक्स लगाउँछन् । तैपनि धेरैले ‘हैट’ भनिहाल्छन् । ‘धेरै भयो यतै बसेको, त्यही भएर चिन्छन्,’ उनले भने । बाबुआमा काभ्रेको तिमाल गाउँमा छन्
नेपाली पुगे चाइनिज आइडलमा गित गाउन, सम्मान स्वरुप सेयर गरौ‌ं ।
सन्देश सिंह देउजाले चाइनिज भाषामा नेपालको नेपाल आइडल जस्तै रियालिटी शो मा आफ्नो गीत गाउने क्षमता देखाएका छन । संगीत मा बिशेस रुची राख्ने सन्देश सिंह ले नेपाली दौरा सुरुवाल ढाका टोपी मा सजेर चाइनिज कार्यक्रम मा चाइनिज भाषा मा गीत गाएका हुन । यसरि नेपालीले चाइनिज भाष मा यती ठुलो मन्च मा स्पस्ट रुप गाएको यो पहिलो पटक हुनु पर्छ । भिडियाे: